Gịnị mere m iPhone ihuenyo blank? Lee azịza ya! - Ndị Ọzọ
iphone 6 na -ekwu na ọ na -chaji mana ọ naghị agbanye
iphone 6s enweghị ngosi mgbe edochiri ihuenyo
bọtịnụ ụlọ ọhụrụ iphone anaghị arụ ọrụ
na -eteta n'elekere abụọ nke ụtụtụ
Gịnị mere m iPhone ihuenyo blank? Lee azịza ya!
Na-emetụ iPhone gị aka mgbe ngebichi ahụ gba nkịtị. Ma ihuenyo ahụ gbanwere oji, ọcha, ma ọ bụ agba dị iche iche, ịnweghị ike iji iPhone gị ma ọlị! N’isiokwu a, m ga-akọwara gị ihe mere gị iPhone ihuenyo bụ oghere na m ga-egosi gị otú idozi ma ọ bụ idozi nsogbu .
Gịnị Mere My iPhone Screen Go Blank?
Ọtụtụ ndị kwenyere na enwere ngwaike ngwaike mgbe ihuenyo iPhone ha gba ọtọ. Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe, iPhone meziri na-aga oghere n'ihi software glitch, na-eme na ihuenyo na-egosi kpamkpam nwa ma ọ bụ na-acha ọcha. Nzọụkwụ dị n'okpuru ga-ebu ụzọ jegharịa gị site na usoro nchọpụta nsogbu abụọ dị mkpa iji soro tupu ịgagharị nhọrọ ndozi ihuenyo.
Force Malitegharịa ekwentị gị na iPhone
Nzọụkwụ mbụ ị kwesịrị ị na-eme mgbe gị iPhone ihuenyo bụ oghere bụ ịmanye Malitegharịa ekwentị gị iPhone. Ọ bụrụ na obere ngwanrọ glitch hapụrụ ihuenyo oghere, ike reboot kwesịrị idozi nwa oge nsogbu ahụ. Achọrọ m imesi ike na nke a agaghị edozi isi ihe kpatara nsogbu - anyị ga-eme nke ahụ na nzọụkwụ ọzọ!
E nwere ụzọ ole na ole dị iche ịmanye ịmalitegharị iPhone dabere na ụdị ị nwere:
iPhone 8, X na ụdị ndị ọhụrụ : Pịa ma hapụ bọtịnụ ka welite olu ahụ , pịa ma hapụ bọtịnụ ka belata olu , pịa pịa y jigide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe akara ngosi Apple gosipụtara na ihuenyo.
iPhone 7 na 7 gbakwunyere : n'otu oge pịa ma jide bọtịnụ ike na olu ala button ruo mgbe akara ngosi Apple pụtara na etiti ihuenyo ahụ.
iPhone 6s, SE na nsụgharị ndị mbụ : pịa ma jide mmalite bọtịnụ na bọtịnụ ike n'otu oge ahụ ruo mgbe ị hụrụ akara Apple gosipụtara na ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na agbanyere iPhone gị na ihuenyo ahụ dị ka ọ dị mma, dị mma! Dị ka m kwuru na mbụ, anyị ka edobeghị ezigbo ihe mere iPhone ihuenyo gị ka oghere. Ọ bụrụ na gị na iPhone ihuenyo bụ ka oghere mgbe ị gbalịrị iji tọgharịa ya, ị ka nwere ike itinye gị iPhone na DFU mode ma weghachi ya. Ka anyị gaa na nzọụkwụ ọzọ.
Etinye gị iPhone na DFU mode
Miri software nsogbu, dị ka onye nke ahụ nwere ike ịhapụ ihuenyo iPhone gị, nwere ike ịbụ ihe na-agaghị ekwe omume ịchọta. Ọ dabara nke ọma, anyị nwere DFU weghachi, nke erases wee reloads niile koodu na gị iPhone. A DFU weghachite nwere ike idozi nsogbu miri emi nke iPhone sọftụwia!
Ekwadoro m ịkwado iPhone gị tupu itinye ya na ọnọdụ DFU ka ị ghara ida foto ọ bụla, vidiyo, kọntaktị na data ndị ọzọ. Mgbe ị dị njikere, lelee ntuziaka anyị ga-egosi gị -esi etinye gị iPhone na DFU mode .
Nhọrọ Mmezi IPhone
Mmebi kpatara mmiri ma ọ bụ ịdata na mmiri siri ike nwere ike iwepu ma ọ bụ mebie ihe dị n'ime iPhone gị ma mee ka ihuenyo iPhone gị pụọ na oghere. Mee na ndị ọkachamara Apple na mpaghara Storelọ Ahịa Apple gị ma ọ bụrụ na atụmatụ AppleCare + kpuchie iPhone gị. Otú ọ dị, ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na mmiri mebiri gị iPhone ihuenyo na-aga oghere, Apple nwere ike jụ ịrụzi ya n'ihi AppleCare + anaghị ekpuchi mmiri mmiri mmebi.
M na-akwado Pulse , ụlọ ọrụ mmezi nke ga-ezitere gị onye ọrụ aka nwere ọrụ ozugbo Ebee ka ị nọ . Ndozi gị na-ekpuchi akwụkwọ ikike ndụ niile ma nwee ike dị ọnụ ala karịa oge Apple!
Na-adịghị na-eru a oghere mpempe akwụkwọ!
Successfully ọma rụziri gị iPhone na ihuenyo bụ agaghịkwa oghere! Oge ọzọ gị iPhone ihuenyo bụ oghere, ị ga-amarakwa kpọmkwem otú idozi nsogbu. Hapụ ikwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone gị!